राष्ट्रपतिलाई गगन थापाको चुनौती : हिम्मत छ भने काठमाडौंमा चुनाव लड्न आइबस्क्योस् ! – ainapati
राष्ट्रपतिलाई गगन थापाको चुनौती : हिम्मत छ भने काठमाडौंमा चुनाव लड्न आइबस्क्योस् !
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा सिन्को पनि नभाँचेको नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद् देशव्यापीरुपमा गरेको शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको अन्तर्गत सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तो बताएका हुन् ।
संसदमा दुईतिहाइ बहुमत रहेको, ४ सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा सरकार बनाएको र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश जितेको नेकपाको सरकार नालायक सावित भएको दाबी गरे ।
‘यो सरकार बाहिर भ्रष्टाचार गर्दिन भन्छ तर, बाइडबडी जहाज खर्लप्पै खान्छ, सेक्युरिटी प्रेसमा भ्रष्टाचार गर्छ र बालुवाटार जग्गा समेत खर्लप्प खान्छ। त्यतिमात्र होइन अहिलेसम्म नभएको बजेटभाषण अघि व्यापारीलाई बोलाएर राजस्वको दर तलमाथि गर्छु भनेर पोस्ने काम गर्छ,’ उनको आरोप थियो।
‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्नेहरुलाई उनले भने, २०५९ सालमा राजाकै कारण आन्दोलनामा लाग्नुपरेको बताए।
प्रचण्ड र केपी ओलीको झगडा मिलाउने जिम्मा राष्ट्रपतिको नभएको भन्दै उनले भने, ‘यदि तपाईँ श्री ५ बडामहारानी बन्न चाहनुभएको हो भने भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपति महोदय, आँखा नचम्काइबक्स्योस्, हात नलम्क्याइबक्स्योस्’, ‘हिम्मत छ भने काठमाडौंमा चुनाव लड्न आइबस्क्योस् ।’
‘राजा त फाल्यौं, राष्ट्रपति फाल्न हामी सक्छौं,’ थापाले भने। तर, यो भन्दैमा राजा आउ देश बचाउ भन्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ । उनले प्रश्न गरे– आफैलाई बचाउन नसकेका राजाले कसरी जनतालाई बचाउन सक्छन्?’
पशुपतिमा आज क्षमा पूजा गरिँदै, भोलीदेखि भक्तजनलाई खुला
सभामुख नगएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित